Computer Technical Notes & Sharing Softwares: Facebook အတု သတိပြုရန်
ပုံမှာ မြင်တွေ့နေရတာကတော့ Facebook အတု ဖြစ်ပါတယ်။
Log in ဝင်မိတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ မိမိ Facebook အကောင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသော Fan page များအားလုံးကို ဆုံးရှုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ Password များများစားစားမထားတတ်သော သူများဆိုရင် G-talk, twitter စသည်ဖြင့် တစ်ခုပြီးတစ်ခု အဖောက်ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ခိုးတာခံရမယ်ရင် အကောင့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင်သော်လည်းကောင်း၊ အခြား ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း အဖျက်ဆီးခံရ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမည်မသိ Hacker များက ယင်း Facebook အတု link ကို Facebook chatting တွင်လည်းကောင်း၊ Message ပို့ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ G-Talk တွင်လည်းကောင်း ပေးပို့တတ်ပါတယ်။
ပုံမှန် Facebook log in page မှာ-
Facebook logo, Sign UpFacebook helps you connect and share with the people in your life,,Facebook Login,Email:Password: တို့အပြင်၊ English (US) ကဲ့သို့သော ဘာသာစကား ရွေးချယ်မှု၊ Facebook © 2012Mobile · Find Friends · Badges · People · Pages · About · Create an Ad · CreateaPage · Developers · Careers · Privacy · Cookies · Terms · Help စသည်ဖြင့် Option ပါရှိမည် ဖြစ် သည်။
Facebook အတုမှာ ခပ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့် category အလွန်နည်းနေသည် ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် page အတုအား အလွယ်တကူ သိရှိနိုင် ပါသည်။
ဥပမာ- Page တစ်ခုအား ယခုကဲ့သို့ link ပေးပို့ပါသည်။
Dear Admin. Please can you havealook at my Blog that i have written about the wonderful country of myanmar. I hope you will like it and please feel free to advertise your page on my blog.
http:// နောက်တွင် ပုံမှန်မြင်နေကျ အင်္ဂလိပ် အက္ခရာများ မဟုတ်ပဲ 12345 စသည်ဖြင့် ဂဏန်းသင်္ချာဖြစ် နေတတ်ပါတယ်။
Link ပေးပို့သူဟာ Hacker ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပြီး၊ အခိုးခံ (Hack ခံ) လိုက်ရသော တစ်ဦးတစ်ယောက် လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် စာဖတ်သူတို့ အကောင့်/Page များထံ ရောက်ရှိလာနိုင်သဖြင့် ကြိုတင်လေ့လာ သတိထားနိုင်စေရန် သတင်းပေးအပ်ပါသည်။
Posted by SLIP at 12:10 PM